Madaxweynaha Jamuuriyada federalka soomaali oo amaaney nabada ka jirta Guriceel | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Madaxweynaha Jamuuriyada federalka soomaali oo amaaney nabada ka jirta Guriceel
Madaxweynaha Jamuuriyada federalka soomaali oo amaaney nabada ka jirta Guriceel
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee uu ku marayo qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa gaaray magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Madaxweyne Farmaajo oo meel fagaare ah kula hadlay shacabweynaha isugu soo baxay soo dhaweyntiisa ayaa ku ammaanay halgankii dheeraa ee dadka deegaanku ay kaga hortageen mileyshiyaadka Alshabaab.
“Waxaan ognahay in magaaladan ay tahay middii ugu horreysay Soomaaliya ee Alshabaab la dagaalanta, taasina waxa ay ka tarjumeysaa soomaalinimadiina, diin iyo dal jaceylkiinna.”
Madaxweynaha ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’antahay wax ka qabashada baahiyaha shacabka sidaa darteedna laga hirgelinayo magaalada Guriceel mashaariic ay ka mid tahay kor u qaadista xirfadaha shaqo iyo horumarinta adeegyada caafimaadka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hor inta uusan ka soo safrin magaalada Dhuusamareeb waxa uu halkaas ka dhagax dhigay mashaariic kor loogu qaadayo kaabeyaasha dhaqaalaha.
Mashaariicdaas oo si wada jir ah ay u dhagax dhigeen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka iyo Madaxweynaha Galmudug ayaa waxaa ka mid ah dhismaha garoonka diyaaradaha iyo xabsiga magaalada Dhuusamareeb, xarunta agoomaha iyo dayactirka laamiga isku xira Gobollada Dhexe.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marti qaadkan loogu sameeyey hooyga Ugaaska uu ka degenyahay magaalada Guriceel ayaa uga mahad celiyey hoggaanka iyo bulshada magaalada diirranaanta ay u soo dhaweeyeen.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku suganyahay gobolka Galguduud waxa uu kulamo wadatashi la yeelan doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada.
Previous articleSoomaaliya oo lagu ammaanay habka qarash bixinta Maaliyadeed
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo gaarey deegaanka balanbale ee gobalka galgaduud